मानिस किन भ्रमण गर्छन् ? भ्रमण गर्ने कति तरिका हुन्छन् ? विश्वमा चर्चित तरिकाहरु - उज्यालो पाटो
मानिस दुखी छ । यही कुराले पनि दुखी छ कि आफुले भने जस्तो जिन्दगी भोग्न पाएको छैन । सोच्न पाएको छैन । कारण, मानिस आफै चलेको छैन । अरु कसैले चलाएको छ । अरुबाट नै संचालित छ । यसो भइरहदा मानिसले स्वतन्त्रपुर्वक आफ्नो बिचार राख्न पाएको छैन ।
मानिसका विभिन्न सौख हुन्छन् । सपना हुन्छन् । कसैको खेल्ने, कसैको लेख्ने, कसैको के बन्ने सौख हुन्छ । यि नै सौख मध्यका घुम्नु पनि एउटा सौख हो । सपना हो ।
यात्रा गर्न सबैलाई मनपर्छ ।
हुन त यात्रा गर्न, नयाँ ठाउ घुम्न कसलाई पो मनपर्दैन होला र ? स्वभावले नै मानिस ज्ञानको भोको छ । नयाँ कुराको अन्वेषण गर्न चाहन्छ । किन मानिसहरु आफ्नो प्यारो घरपरिवार छाडेर संसारभरि भौतारिन्छन् ? किन मानिस घुम्न चाहन्छन् भन्ने धेरै कारण छन् । कारणहरु व्यक्ति नै पिच्छे फरक हुन सक्छन् । मतमतान्तर हुन पनि सक्छ । तर पनि केही कारणहरु यस्ता पनि हुन सक्छन् ।
घर छाडेर हिड्नु भनेको आफैलाई बुझ्नु हो । जिन्दगी बुझ्नु हो । घरायसी, व्यवसायिक तथा मानसिक दबाबबाट टाढा बस्नु हो । सिक्नुको अर्थ ज्ञान आर्जन गर्नु हो ।
आफुसँग भएको अनुभवले मान्छेलाई खार्छ । कुनै पनि ठाउँको विशेष कुराहरु तथा देशको प्रबिधिबाट केही सिकेर त्यसको अनुसरण गर्नु राम्रो पक्षमा पर्छ ।
सम्बन्ध बिच्छेद, आफ्न्त गुमाउनुको पिडा, लागु औषध दुव्यसनीको लत हटाउन तथा अभ्यस्त बन्न पनि मानिस घुम्ने गर्दछ । एकै ठाउमा बसेर पिडा भुल्न गाह्रो हुन्छ । बारम्बार यादहरुले पोल्ने गर्दछ । ति नै यादहरुलाई थन्क्याएर मान्छे पिडाबाट भाग्न चाहन्छ ।
भागदौडको समय छ । मानिसलाई खान खाने समेत फुर्सद छैन । व्यस्तताका बाबजुद मानिस आफुलाई आनन्दित राख्न चाहन्छ, सुखी राख्न चाहन्छ । र, जागिरबाट बचेको समयलाई, केही अवसरमा पाएको विदालाई सदुपयोग गर्न देश विदेश चाहर्छ ।
ज्ञानको क्षेत्र बढाउन
मानिसमा ज्ञान सिमित छ । हरसमय मानिस ज्ञानको क्षेत्र बढाउन चाहन्छ । कुन ठाउमा के भइरहेको छ ? र, कुन, कस्तो संस्कृति अंगालिरहेको छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ ।
पारिवारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँन
बिभिन्न विकसित देशहरुले आफ्ना नागरिक तनाबमुक्त हुन भनेर घुम्नका लागि खर्च छुट्याएका हुन्छन । यही मेलोमेसोमा पारिवारिक सदस्य लिएर घुम्न निस्कन्छ । प्रकृतिमा कावा खादै सुन्दर विचरण गर्छन् । प्रकृतिमा समाहित भएर आफुलाई चिन्छन् । आफू बाच्नुको अर्थ बुझ्छन् । यसो गर्दा परिवारमा आपसी सम्वन्ध अझ मजबुत बनेर निश्चय नै जान्छ ।
भ्रमण गर्ने कति तरिका हुन्छन् ? विश्वमा चर्चित तरिकाहरु
के केहि मानिसहरुले भ्रमण गरेको बखतमा अरु भन्दा फरक अनुभव गर्न सक्छन् ? या सबै मानिसहरुले एकै किसिमको अनुभव गर्छन् ? कुनै व्यक्ति विशेष वा समय विशेष कुनै स्थानबाट लिन सकिने अनुभव फरक हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसलाई के कुराले फरक पार्छ ?
मानिसहरु जो भ्रमण गरिरहन्छन् र घुम्नमा रुचि राख्छन्, उनीहरुका अनुसार कसरी घुमिन्छ भन्ने कुराले कुनै स्थानबाट प्राप्त गरिने अनुभवहरु फरक फरक हुन्छन् ।
यहाँ हामी विश्वका मानिसहरु सामान्यतया कुन कुन किसिमले घुम्छन् भन्ने जानकारी दिन गइरहेका छौँ । यो तरिका सहि वा यो तरिका गलत भन्नु भन्दा पनि समय र व्यक्तिको रुचि अनुसार यी कुराहरु तय हुन्छन् ।
१. सुस्त भ्रमण
यो खासमा एक प्रकारको हिप्पीहरुको घुम्ने तरिका हो । कुनै विशेष व्यवसायिक प्रयोजन बाहेक कुनै स्थानको भ्रमण गर्दा अपनाइने यो बिधी हिप्पीहरु पछि एकदमै प्रचलित हुँदै आयो ।
सुस्त भ्रमणको अर्थ हो, कुनै एकै स्थानमा लामो समय बसिरहनु । सुस्त भ्रमणमा रमाउँनेहरु कुनै एक स्थान छनौट गर्छन् र त्यहि स्थानमा सामान्यतया महिनौ बिताउँछन् ।
सुस्त भ्रमण गर्नेहरुले चाँडो चाँडो स्थान फेरिरहनेहरुलाई पर्यटक भन्छन् भने आफुलाई घुमन्ते भन्न रुचाउँछन् । चाँडो कुनै स्थानको भ्रमण गरेर सक्ने पर्यटकहरुले स्थानको रमाइलो र वास्तविक अनुभव गर्न नसक्ने दाबी सुस्त भ्रमण गर्नेहरुको हुने गर्छ ।
२. शिघ्र भ्रमण
मानौँ, तपाईको केहि हप्ताको बिदा छ । यस्तो अवस्थामा तपाई के गर्नु हुन्छ ? सकेसम्म धेरै ठाउँ घुमेर थोरै भए पनि सबै ठाउँ पुग्न चाहनुहुन्छ । यो सोचाइ पनि गलत होइन ।
खासमा शिघ्र भ्रमण गर्न रुचाउँनेहरुलाई एकै ठाउँमा लामो समय बस्नु समयको बर्बादी गर्नु हो भन्ने लाग्छ । जस्तै : तपाई मुस्ताङ घुम्न जाने हुनु भयो । बाटो पर्ने तातोपानीमा केहि घण्टा बस्नु भयो, मार्फाको स्याउ चाख्नु भयो र अर्को दिन जोमसोममा बस्नु भयो । सोही दिन मुक्तिनाथ पुगेर कागबेनी एकछिन डुलेर फर्किनु भयो । यसको अर्थ यो होइन कि तपाईले सो ठाउँको अनुभव नै गर्नु भएन ।
शिघ्र भ्रमण गर्नेहरुलाई लाग्छ, जति दिन बसे पनि तातोपानीको अनुभव उस्तै हो । मार्फाको स्याउको स्वाद उहि हो र जोमसोममा उस्तै हावा चल्छ । यसैले उनीहरुले स्थान विशेषको मुख्य कुराहरु घुमेर वा अनुभव गरेर चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो भ्रमण टुंग्याउँने गर्छन् ।
३. सौखका केहि दिन
घुम्नुको अर्थ ठाउँहरु हेर्नु मात्रै पनि होइन । कसै कसैलाई आफ्नो नियमित दिनचर्यादेखि वाक्क लागेको हुन्छ । उनीहरु केहि दिन कुनै राम्रो होटल वा रिसोर्टमा गएर आफुलाई मन परेको पेय पिउँदै आफ्ना परिवार वा नजिकका मानिसहरुसँग दिन बिताउँन चाहन्छन् ।
यस्ता पर्यटकहरु व्यस्त वा एकनाशको जिन्दगीबाट केहि सौखका दिनहरु बिताउँने उद्देष्यमा हुन्छन् ।
४. समूह भ्रमण
एक्लै हिड्नु सबैको रोजाइ हुदैन । यसैले मन मिल्ने मानिसहरुको समुह बनाएर मानिसहरु घुम्न निस्किन्छन् । उनीहरु चिनेका मानिसले भरिएको बसमा चढेर शहर घुम्नु, मन्दिरहरु घुम्नुमा रमाइलो मान्छन् ।
हुन पनि आफुले चिनेका मानिसहरुसँग बसेर नयाँ ठाउँको समूहमा अनुभव गर्दा रमाइलो हुन्छ । कुनै कुरामा हरेकले दिने प्रतिक्रियाहरु फरक फरक हुन्छन् । अझ ति सबै चिनजानका र निकट मानिसहरु हुन्छन् भने त्यो झन् रमाइलो र स्मरणयोग्य हुन्छ ।
५. झोले भ्रमण
तपाई ठुलो झोला बोकेर घुम्न निस्कनु भएको छ । तपाईलाई दिउँसोको खाजा खान मन लाग्छ, तपाई झोला खोल्नु हुन्छ, खाजा त्यहि छ । रात पर्यो, सुत्नलाई कुनै भुइँमा स्लिपिङ ब्याग ओछ्याए मात्रै पनि पुग्छ । असाध्यै धेरै मितव्ययी भएर आफुलाई आवश्यक सबै जसो सामानहरु बोकेर गरिने भ्रमणलाई झोले भ्रमण भनिन्छ ।
नेपालीहरु माझमा यस्तो भ्रमण खासै प्रचलित छैन तर नेपाल घुम्न आउँने केहि पर्यटकहरु यस्तो भ्रमणमा देखिन्छन् । बढि लोभी वा गरिब भनेर चिनिने यस्ता घुमन्तेहरु सकेसम्म कम खर्चमा धेरै ठाउँ घुम्न चाहन्छन् ।